Imveliso yendibano - iChapman Technology Co., Ltd.
Kwinkqubo yophuhliso lwemveliso, icandelo lendibano lelinye lawona masebe ethu abalulekileyo. Ukusuka kuvavanyo lweemveliso, indibano yemveliso, ukuhanjiswa kwemveliso okugqityiweyo, ezi ndawo zisebenzayo, indibano ibonakala ibaluleke kakhulu.
Sahlulwe saziiworkshop ezimbini zebandla zeemveliso zombane kunye nezombane kunye neemveliso zonyango. Kwisebe lemveliso ye-elektroniki kunye nombane, sineenkqubo zokhuseleko zokukhupha kunye nokukhusela umlilo. Kwisebe lendibano yemveliso yezonyango, Siceba ukuseka inkqubo yokujikeleza komoya ngo-2021 ukuqinisekisa ukuba indibano yokusebenzela indibano iyahlangabezana ne-ISO: 13485 esemgangathweni yenkqubo esemgangathweni.
Kwiinkampani ezininzi, ukuhlangana ngesandla kuthatha ixesha kwaye kuyabiza. Sinikezela ngesisombululo esenziwe ngokwezifiso ukusuka ekuhlanganiseni okulula ukuya kulwakhiwo olunzima kunye nendibano. Siza kuzisa iikowuti ezikhawulezayo, ukujika ngokukhawuleza, ukucwangciswa okuguqukayo kunye neziphumo zomgangatho.
UMenzi weChapmanInikezelwe ekuveliseni izisombululo ezininzi ezandisa amathuba eshishini lakho. Ngokupakishwa kwemveliso yesiko, indibano yemveliso, kunye nekhithi yemveliso, akukaze kube lula ukuzisa amaphupha eshishini lakho ebomini. Iqela lethu elinemfesane lizinikele ekwenzeni izisombululo zemveliso yoqobo ezimele iinjongo zeshishini, zilungelelanise imveliso, kwaye zenze lula imisebenzi. Kwaye ngezixhobo eziseDongguan, sinokuzisa izinto zethu kwimveliso kubaphulaphuli abaninzi, sinike inkxaso yobuchwephesha enokutshintsha ubuso beshishini lakho.
Umenzi weChapmanUkuhlanganiswa kwemveliso kunye nokupakishwa kuphakamisa ukulindeleka kweenkampani zokufezekisa umntu wesithathu, ukwandisa ilizwe leshishini njengoko sisazi. Usebenzisa indibaniselwano elungeleleneyo yezandla zobuchwephesha, itekhnoloji ekhulayo, kunye nemeko ezizodwa, iimveliso zakho ziya kudityaniswa kwaye zidityaniswe ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo. Kwaye kunye neqela loyilo loyilo, ukhetho olubanzi lokubonelela, kunye nokujonga ingqalelo kwiinkcukacha, uluhlu lwakho luya kulungiswa kwaye lupakishwe ngobunkunkqele obungenakuthelekiswa nanto kunye nokungxamiseka.